जंगलमा भेटियो दुई टाउको ४ आँखा भएको सर्प, देख्नेबित्तिकै सबैको होस् उड्यो – Pradesh Online Khabar
जंगलमा भेटियो दुई टाउको ४ आँखा भएको सर्प, देख्नेबित्तिकै सबैको होस् उड्यो
रोचकNo Comment on जंगलमा भेटियो दुई टाउको ४ आँखा भएको सर्प, देख्नेबित्तिकै सबैको होस् उड्यो
अहिले उक्त सर्पको नाम राखिएको छ, डेव नाम गरेका व्यक्तिले सर्पलाई समातेका थिए भने त्यसकारण सर्पको नाम ‘डबल डेव’ राखिएको छ । यो सर्प हेर्दा अचम्मको रहेको छ । यस सर्पको दुई टाउको छ भने ४ आँखा रहेको छ तर शरीर भने एक रहेको छ । सुरुमा सर्पलाई देख्दा पर्यावरण सल्लाहकार डेव शेन्डलर अचम्मित भएका थिए । उनलाई डर पनि लागेको थियो । यसका साथै उनले सर्पका लागि जंगलमा बाँच्न कठिन रहेको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार दुई टाउको भएको कारणले उक्त सर्प एकदमै ढिलो हिँड्ने गर्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस : मानिसलाई किन निद्राको आवश्यकता पर्छ? निद्रा दुई किसिमका हुन्छन्, एनआरइएम र आरइएम। यी दुवै खाले निद्रा सुतेको बेला पालैपालो पर्छ। एनआरइएम निद्रा निकै गहिरो हुन्छ। यसको पनि विभिन्न तह छ। सुतेपछि पहिलो, दोस्रो तह हुँदै गहिरो निद्रा पर्छ। यसपछि आरइएम निद्रा पर्छ। केही समयपछि फेरि पहिलो निद्रा पर्छ र यही क्रम चलिरहन्छ। जति बिहान हुँदै गयो आरइएम निद्रा बढी र अर्को गहिरो निद्रा कम हुँदै जान्छ। दुवै किसिमका निद्राको आ–आफ्नै महत्व छ। आरइएम निद्रामा सपना देखिन्छ। देखेको सपना याद हुनसक्छ या नहुन पनि सक्छ।पढेको बुझ्न र सम्झनको लागि निद्रा आवश्यक छ। यसबारे केही प्राविधिक कुरा गरौ। सम्झिने तरिकाको कुरा गर्दा इमिडिएट मेमोरी (अरुले भनेको अहिले सम्झिने), सर्ट टर्म मेमोरी (पढेको, घोकेको कुरा २४ घन्टासम्म सम्झिने) र ( लामो समयसम्म सम्झिने) लङ टर्म मेमोरी हुन्छन्।
कम सुत्नाले के हुन्छ? दैनिक ५ घन्टाभन्दा कम सुत्नेहरुमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघातको खतरा, चिन्ता रोग, डिप्रेसन र मोटोपना जस्ता समस्या हुन्छन् भन्ने सोधकर्ताहरुको भनाइ छ। त्यस्तै अनिँदोको कारण सडक दुर्घटनाको खतरा बढ्छ। राति लगातार निद्रा नलागे आत्महत्याको विचार आउने, आत्महत्याको प्रयास गर्ने वा आत्महत्या नै गर्ने सम्भावना बढ्छ।दैनिक रातमा ४ घन्टाभन्दा कम सुत्नेहरुमा विभिन्न किसिमका क्यान्सरको खतरा बढ्छ। जस्तैः ठूलो आन्द्रा, प्रोस्टेट र ब्रेस्ट क्यान्सर आदि। दिउँसोको बदला राति काम गर्नेहरुलाई वा नाइट सिफ्टमा काम गरिरहनुपर्नेहरुलाई पनि स्वास्थ्यको हिसाबले हानिकारक छ। निद्रा मस्तसँग लाग्ने भए पनि आफ्नो व्यस्तताले गर्दा नसुत्दा हुने समस्या र बेफाइदाका कुरा त भए, अब निद्रा नै नलागे के गर्ने त ? निद्रा नलाग्ने कारणहरुमा शारीरिक र मानसिक रोग हुन सक्छन्।
भटमासका चामत्कारिक फाइदा
अमेरिकामा किशोरीले गरिन् विमान चोर्ने कोशिश गरेपछि
अस्ट्रेलियाको बारेमा यस्ता अनौठा कुराहरू जान्नुहोस जो कमैलाई मात्र थाहा छ
किन हुन्छ महिलाको स्वर मसिनो र सुरिलो ? पुरुषको चाहि किन मोटो र धोद्रो ?
अनौठो देश : जहाँ दुई विवाह नगर्ने पुरुषलाई दिइन्छ सजाय